U-Ukraine u-Ukraine - uKsenia Kuzmenko
I nkwenkwezi Biographies
Beautiful Miss Ukraine - uKsenia Kuzmenko ngokugqithiseleyo. Kwiminyaka emininzi edlulayo, zingaphi iindlovukazi ezintsha ezavela, kwaye sonke siyakhumbula uMninimzi wase-Ukraine ongathintekiyo '97.
Umama uvela eKarelia. Idolophu yasekhaya i-10 km ukusuka kumda weFinland. Ookhokho bakaMama ukuya kwisizwe sesixhenxe baphila eLwandle oluMhlophe. Kukho ubuzwe obunjalo - ama-pomors anama-blondes anamehlo aluhlaza. Ngokuqhelekileyo, kwenzekani ne-Miss Ukraine-Ksenia Kuzmenko.
U-Ukraine u-Ukraine - uKsenia Kuzmenko uthanda ubusuku obumhlophe. Kukho into enomdla, emangalisayo kunye nemilingo. E-Karelia kukho ubusuku obumhlophe ngexesha lonke! Kwaye xa ndakhe ndahlala kunye nogogo, ekuqaleni ndingazange ndilale ngehora elibekwe ngumntwana: yonke into yayimele efestile kwaye ibhekise ubusuku obukhanyayo: indlela esinayo ngayo imini, kuphela ngaphandle kwelanga. Ngomnye uhlobo lommangaliso ...
Mhlawumbi ukhumbula le ngqungquthela yefilimu kunye no-Angelica kwiincwadi zokubhala zika-Anna noSerge Golon- "U-Angelica kunye noKumkani", "I-Angelica engenakulinganiswa" kunye nabanye? Ngoko ke kwiminyaka yokuqala yesikolo, umgangatho wobuhle ngu-Angelica - Michel Mercier. Ngokuqhelekileyo, andiyithandi into engenanto, ayizalwanga ubuhle. Ndiyathanda ubuso ... "bukhulu", ukuba ndiyakuthi njalo. Yileyo ndlela uSophia Loren. Kamva, ndandithanda uLinda Evangelista. Okwangoku namhlanje u-Angelina Jolie ofanayo ... uKos Moss ... Kodwa kubonakala ngathi kwakungabikho abaVangeli ngaphandle kukaLinda. Ndasebenza ixesha elide kwi-business model kwaye ndaqonda ukuba kumzekelo kubaluleke kakhulu xa ubuso bakhe bunokutshintshwa lula kulolu hlobo okanye lo mfanekiso. Kwaye, nangona ukubonakala kukaLinda kubonakala ngokwaneleyo: impumlo enkulu, amehlo amakhulu, kunjalo, kulula kakhulu ukutshintsha. U-Kate Moss ibali elifanayo.
Ubuso bam bunzima ukutshintsha, ndicinga. Nangona abaninzi bezama. Ndiyakhumbula ukuba ukuba ndibonise enye iingubo kwaye ndambethe ngengubo, ngoko kuphela ukuba amehlo am kunye namaqaqa amancinci ayabonakala. Kwaye ngoku ndihamba nge-catwalk, kodwa ndiyakhwaza kubaphulaphuli: "Kuzmenko, saqaphela wena! Usengcono kakhulu! "Ndiyena kwinto yokuba, mhlawumbi, ukubonakala kwam kunzima ukutshintsha ...
Inzala yokuqala ku-Angelica yashiya impembelelo yam ekuqondeni kwam ebhinqa kunye nobuhle besilisa. Indima ebalulekileyo yendoda kwidrama yadlala ngumdlali weFrentshi uRobert Ossein. WayenguGeffrey de Peyrak - ngokohlobo olunobunzima. Inwele-mnyama, i-eyes-light ... Ndiyayithanda le. Kodwa ... ubuhle, ndicinga ukuba akubalulekanga. Indoda yindoda ethandekayo.
U-Ukraine u-Ukraine - uKsenia uKuzmenko ubomi bufaniswa nomdlali waseSoviet u-Anastasia Vertinskaya. Kwaye kwakuthiwa kaninzi ukuba ndihlobo lweBrigitte Bardot. Kodwa yilapho ndandinxiba i-bang ndiphakamisa iinwele zam. Kwaye maxa wambi bathi ndabonakala ngathi amaqhawe aseJapane aphikisayo ama-cartoon. Ngokukodwa xa ndifumana ukwenziwa okuqhakazileyo.
Ndiyazi ukuba kubonakala ngathi "ndingafihli". Enyanisweni, ukuphakama kwam kuku--173 cm. Mhlawumbi, ndibukeka ngincinci ngenxa ye-encinci-boned and thin. Xa ndisebenza njengomzekelo, ndandisoloko ndicelwa kwaye ndilinganisa ubude bam.
Ngaba ufuna ukwazi ukuba ndivakalelwa njani ngophenyo lweplastiki? Kakhulu kakhulu! Kwaye ndicinga ukuba akubanga buhlungu, ngoko kutheni? Kutheni ungalungiseli uhlobo olunike lona, ​​ukuba lusebenza ngokwenene? Kodwa ndiyakholelwa ukuba ukwenza isayizi sesihlanu sesifuba kukulimaza. Okanye ukwenza imilomo ngesigxina sombuso ... Ewe, kunokwenzeka ukulungisa iindlebe ukuba kumntu owenza izinto ezinzima. Unokwenza, umzekelo, ukususa ingcambu encinane. Kungekudala ndathetha nombonisi omnye weTV, owatshintsha isimo sakhe sempumlo, kodwa wayefanele akwenze kwiingcebiso zoogqirha. Uthi uhamba ngezohlanjesi zesihogo! Kwakubuhlungu gqitha ukuba akafuni mntu.
Ndiyakhumbula xa ndafika kumncintiswano "Miss Ukraine", wonke umntu wayandibuza: "Uyenze phi ipumphu?" Kwandibuza kakhulu, kuba ndandineminyaka eli-17 kuphela! Ngaba umntu unokucinga njani ngemisebenzi kule minyaka?
Ngokuqhelekileyo, abafazi , bewela phantsi kweelayi lotyando, baba ngumlutha. Akunakukwazi ukuyeka: "Kutheni ungayikhumbuli?", "Kutheni ungayithathi na?" Kwaye abafazi bayafana. Awuzange uyibeke ingqalelo? Uninzi kakhulu owenza impumlo, imilomo, isifuba ... Efanayo Ivanna Trump. Kwaye thina, e-Ukraine, sinemifanekiso efanayo. Andifuni ukukhankanya amagama. Ndiya kubandakanya nabo kwiqela elithile - abathandi beplastiki. Ngokuqinisekileyo banjengama-clones! Kwaye kubonakala kum ukuba abantu abayithandi njalo.
Andizange naneliseke ngamagqabi amancinci. Kwaye kungakhathaliseki ukuba ndihamba kangakanani kwindawo yokuzivocavoca, nayiphi na into esenzayo, ayitshintshi. Mhlawumbi, i-genetically is. Kwaye omnye wam obaziyo wafaka iimfutho ze-silicone kumlenze ongezantsi ukwenzela ukunyusa amaqaqa. Imilenze yakhe ibonakala ilungileyo. Ndabathintela-bachukumisa, bachukumisa-bachukumisa ... kum, kubonakala, ndizama kakhulu: ngaphandle kokuzivocavoca umzimba ukuze ndifumane imilenze epheleleyo. Kodwa ke ndacinga ukuba, ukuba indalo yanginika loo maqhosha, ngoko, ngokuchanekileyo, bayangifaka. Ndisazikhusela ngexesha.
Ndiyidla yonke into . Kodwa andithandi. Ngenxa yesizathu esilula ukuba andifanelekanga kakhulu. Xa isisu somntu sisoluliwe, ukutya okungaphezulu kungena kuye. Kwaye kutshanje, inani elinyukayo labantu lifumana ukuhlinzwa ukuze kunciphise isisu. Ndiba nomhlobo owenzayo. Wayeqhele ukulinganisela ngaphezu kwekhilomitha ezili-100, kodwa ngokoqobo emva kweenyanga ezintathu emva kokusebenza kwakhe waqala ukulinganisa u-65. Uthi: "Andiyi kulambile."
Kubonakala kum ukuba kungcono ukuqeqesha umzimba ngokutya, kodwa isisu: udle ngendlela efanelekileyo ngexesha elithile. Emva koko unokutya yonke into encinane.
Abazali bam kunye nam sincinci, ngoko andizange ndikhathazeke ngokutya. Nangona emva kokukhulelwa, akuzange kube nzima, njengabo bonke abantu, kodwa ngokuchasene-baphosa! Waba ngu-5 kg ​​lighter.
Kukholelwa ukuba kufuneka uguqulwe ukwenza "ukuqeqesha" ulusu. Kodwa njengoko ndazama ukutshintsha ukhilimu wosuku, ndandisoloko ndabuyela ngokufanayo - ukunyusa kwi-Decleor. Nguye kuphela emva kwesikhumba sam sikhululekile. Ndivuyayo ndifumene. Ikhefu yesikhumba ecaleni kwamehlo inokutshintsha ngokukhawuleza. Ngelo xesha iDarphin - ukulungelelanisa okulungileyo, kungashiyi nto. Ubusuku - ndandule ndamcebisa umngane-ukusuka eShiseido. Akunakudinga ukuba basebenzise njalo ngokuhlwa-ngokwaneleyo amaxesha amathathu ngeveki. Kwasekuseni isikhumba sinyanzele, ngetoni. I-Cream yomzimba, kwakhona, ukusuka eDarphin. Ndingumfana walo mqondiso. U-Ukraine u-Ukraine - uKsenia Kuzmenko unobisi lwabo ukususa i-makeup, i-toniki, i-oyile yomzimba ... Ioli - ipholile kakhulu. Kodwa kuphela ukuba akufuneki ukuba uhambe ngokukhawuleza emva kokufaka isicelo, kuba isikhumba sifanele sivunyelwe ukuba siphume. Maxa wambi ndide ndisebenzise amafutha anamnandi. Kodwa ngokuqhelekileyo, iphunga lilumkile ...
Kukho novumba apho ndiphelile khona. Ewe! Ekubini okanye kathathu ebomini bam ndaphuphuma emoyeni ofanayo-Ingelosi nguTyerry Mugler. Ke mna, yiyona nto iyona nto iyingozi kakhulu, inuka kakhulu! Ngesinye idiza elinye ibhinqa lidlulile, ndambamba indlela yakhe yokuqhumisa kwaye kwangoko yalahleka ingqondo! Kwintlintle "Miss World" wam uhlala naye - waseYugoslav - wazama ukuthunga amanzi la ngasese ... Uphinde waphela. Ndihamba kwiivenkile ezidlulileyo uT Thierry Mugler ngaphandle kokujonga emva!
Ngesinye ixesha ndaya kwi-cosmetologist, ebenesizathu esithile okanye esinye senze i-chemical peel njalo kwiiveki ezimbini. Xa intombi yam yasemzini yayivile ngale nto, yayinguye, ukuyibeka ngokukhawuleza, inokutshatyalaliswa. Kutheni kufuneka intombazana encinci ikhiphe imichiza rhoqo? Emva koko ndandingazi ukuba kunokulimaza isikhumba sam. Ukongezelela, ndafumana amava amnandi ngokucoca ubuso bam. Ngenxa yoko ngoku ndisoloko ndwendwela i-cosmetologists. Kubonakala kum ukuba i-cosmetologist yethu ihlala isinika ezo nkonzo esizidingayo nje ukuba zidayise le nto okanye yenzayo okanye yenza "isicwangciso" kwi-salon ... Ukuba uchwepheshe ontle ufumana ubomi, ke le inhlanhla. Ndilapha, umzekelo, ndonwabile ngeentloko zam. Ndiye kuye iminyaka eyi-8. Bahlobo abaninzi, bebona umbala wam enwele, bacinge ukuba ndingumntu wendalo. Ngamanye amaxesha ndiyibhinqa kwiingcambu zePlacenta Formula, enika umphumo omuhle wokukhula kweenwele. Ngokuqhelekileyo, ndikhetha izimonyo zeenwele zenkampani yaseJapan i-Kanebo. Ndisebenzisa iindlela zabo zeenwele ezilimele, emva koko zidibanisa kalula.
Ndiyathanda kakhulu izimonyo zaseMelika uBobbi Brown. Kwiminyaka emininzi ndisebenzise kuphela izithunzi zabo. Abenakuqhathaniswa nokubetha, oya kutsala iintolo, kunye nezithunzi zomthunzi, kunye namacangca amacwecwe ... kwaye ayiboni ngopende - yendalo. Kwaye umbala wepeyinti ungokoqobo: ukusuka ku-beige ekhanyayo ukuya kubomvu, emnyama. I-gloss yelitye iyancomeka kakhulu kubo. Ewe, kwaye udibene.
I-Mascara kunye ne powder nguGuerlain. Anditshintshi. Andiyisebenzisi i-creams esiseko - ndine powder eyaneleyo. Ityhile, kodwa ifihle impazamo yayo kakuhle. Ndisebenzisa kuphela i-corrector kwesikhumba ejikeleze amehlo ukusuka kwiDior okanye i-YSL.
Kwaye uDeor unomlomo oyingqayizivele womlomo, okwenyusa umthamo wabo - i-Lip Maximizer.
Apha yena ngowokuqala ukuba aphele kwiintengiso. Into enhle! Ukuba ndiyabona, ngoko ndiza kuthenga iibhubhu eziliqela kanye - kunye nam intombi.
Kwakudala kakhulu ukuba ndide ndibe neentloni xa ndibizwa ngokuba ngu-Miss Ukraine. Kwakukho abaninzi abaphumeleleyo emva kwam ...
Uyazi, ndiyakhumbula ngokuqinisekileyo ukuba ndiqinisekile ngokusindiswa kwam. Ukungenazo naziwayo, ndingenayo izalamane ezicebileyo, ndandifikile, ndazikholelwa mna ndaza ndanqoba. Ndandineminyaka eli-17 ubudala.
Ndandingumntu omncinci wenzelwe . Ndinequmrhu elenza ukulungiswa ukusuka ekuqaleni. Kodwa ngoku ndihlala kwi-limbo, ndiyayiqonda-andifuni ukuba lo ube ngumsebenzi wobomi bam bonke. Ndiya kuqhubeka ndisebenza, kuba umbane usebenza. Kodwa, ngokuqinisekileyo, ndiya kugqiba ezo projekthi ezifanele, kwaye ndiya kwenza enye into. Mhlawumbi, kuya kubakho ishishini lokubonisa. Le nkqubo inomabonwakude. Kukho kakade ingcamango ecacileyo.
Ndandisoloko ndixelelwa ukuba ngokubonakala kwam, ngokukwazi kwam ukuthetha kunye nokuziphatha noluntu - kufuneka usebenze kumabonwakude. Ekuqaleni kwakumnandi, kuba ndandithanda kakhulu ukuyila. Kodwa ngoku ndiphulaphula ngenyameko amagama anjalo. Kungekafiki ukuthetha, kunjalo, kodwa ngenxa yezizathu ezithile kubonakala kum ukuba kungekudala okanye kamva kuya kwenzeka. Nangona kunjalo, ndiyaphupha ngoku ...
Ienkwenkwezi ezicebileyo zeRashiya zibonisa ishishini
Ubomi bomntu bomculi u-Alsou
Michailov Stas, ubomi bodwa
Omnye uthanda uSophia Loren
Umsunguli weofisi yomzekelo uJohan Casablancas
Umzobo weskrini uTatiana Navka
I-Blue Clay: Izinzuzo zeNwele
Thenga ilanga lokukhusela kwi-solarium
Isobho se-soup - iresiphi yonke imihla
Indlela yokukhetha iingubo zangaphantsi kwabesetyhini abakhulelweyo
Ngaba abantu bathanda ukuthetha ngesondo?
Unyango lwe-bug bite irritation
Iinqwelo ze-greyised nge ginger
Unyango lwe-acne kunye namafutha abalulekileyo
Umsebenzi wabantwana njengentuthuko yengqondo
Iimveli ezithandekayo zikaNovemba
Indlela yokuthetha nomntwana weminyaka emine